7 Cashar Oo Tafaariiq Loogu Talo Galay Casrigii E-Ganacsiga | Martech Zone
E-Commerce waxay la wareegeysaa warshadaha tafaariiqda daqiiqad. Waxay ka dhigeysaa mid aad u dhib badan in la sii wado dukaamada lebenka iyo hoobiyeyaasha.
Bakhaarrada leben-ka-birta ah, kuma koobna kaydinta alaabada iyo maaraynta xisaabaadka iyo iibka. Haddii aad maamusho dukaan jireed, markaa waxaad u baahan tahay inaad u gudubto heerka ku xiga. Sii dukaamada wax soo jiidasho leh Sabab inay waqtigooda ku qaataan inay u soo degaan dukaankaaga.
1. Bixi Khibrad, Maahan Keliya Alaab
Waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo ku saabsan dukaanka lebenka iyo madaafiicda marka loo eego kaliya iibinta alaabada jirka. Sii iyaga khibrad iyo sabab ay ugu soo noqdaan bakhaarkaaga. Taasi waa sababta inbadan iyo bakhaarro badan oo fikradaha ah ayaa sii yaraanaya iyo dhisitaanka niche naftooda.
Away waa mid ka mid ah keydka fikradaha noocaas ah ee Soho. Halkan waxaad ka adeegan kartaa alaabada safarka. Labada iridood ee ka soo horjeedka dukaanka waxay dareemayaan sida laba dukaan oo kala duwan oo midba midka kale u qulqulayo.
Bakhaarkaaga jireed ma awoodi karo inuu isku mid u ekaado sannado, ama xitaa bilo. Dukaameysteyaasha waxaa loo soo bandhigayaa qaddar aad u tiro badan oo xog ah oo iska soo baxa khadka tooska ah. Beddelida muuqaalka iyo dareemka dukaankaaga xilliyada qaar waxay siinaysaa riixitaan wanaagsan lugooyada iyo ugu dambeyntiina iibka.
Ka shaqee naqshadda iyo qaabeynta dukaanka, iyo badeecooyinka aad iibiso. Dukaankaaga jirka ayaa ka faa'iideysan kara istiraatiijiyad la mid ah jadwalka taariikhda ee suuqgeynta dijitaalka ah.
Story waa dukaan ku yaal magaalada New York. Dukaanka ayaa is-cusbooneysiiya oo bil kasta u muuqda mid cusub. Mawduuc cusub bil kasta oo kale wuxuu la xiriiraa naqshadeynta iyo qiimaha sumadda. Waxay sidoo kale ogeysiisaa macaamilka waxa iibka ku jira waxayna ogeysiisaa dhacdooyinka la qabanayo bishaas. Iibintooda ayaa korodhay laba laab labadii sano ee la soo dhaafay.
2. Isu keen Dadka
Abaabulka munaasabadaha waa hab kale oo lagu soo jiito macaamiisha. Fasalada jimicsiga, koorsooyinka, aqoon isweydaarsiyada, bandhigyada buugaagta iyo waxqabadyada kale ee isdhexgalka ah ayaa ah habab aad u fiican oo lagu kicin karo xiisaha.
Chamber waa dukaan cusub oo ku yaal New York oo bixiya daabacado kooban oo xadidan iyo shaqooyin gaar ah oo farshaxan iyo naqshadeyn ah. Waxay qabteen xaflad casho sharaf ah iyagoo kaashanaya majaladda PIN-UP intii lagu jiray Design Miami. Tani waxay gacan ka geysaneysaa dhisidda bulshada waxayna u horseedaa macaamiisha inay noqdaan macaamiil daacad ah.
3. Kooxaha Hal-abuurnimadu Waa Waajib
Si loo bixiyo khibrad oo aan kaliya alaabtu u qaadin hal-abuur. Sii muhiimad sare kooxda hal abuurka iyo suuqgeynta. Hubso inaad haysato nuxur rafcaan leh. Hubso in looga faa'iideysanayo kordhinta iibka. Tani waxay astaantaada ka dhigeysaa mid cusub.
Geesi Noqo Oo Isku day Wax Cusub
Soo bandhigida fikradaha cusub, iyo rakibida maqaallada hal abuurka dukaanka ku jira ayaa ka sarreeya. Qaado khatar la xisaabiyay oo saadaal ku samee xogta la baaray.
4. Diirada saar Xiriirka Macaamiisha
Dhinac gaar ah oo ka mid ah dukaamada leben-n-hoobiye ayaa ah faa'iidada si loola kulmo oo saameyn toos ah loogu yeesho macaamiisha. Muxuu degelku u halgamayaa inuu sameeyo, iyadoo la adeegsanayo sawirada hal abuurka leh iyo qoraalka qancinta, waxaa lagu sameyn karaa dhoolla caddeyn iyo gacan ka geysashada dukaankaaga. Tababbarka shaqaalahaaga si ay khibradda dukaamaysigu uga dhigaan mid saaxiibtinimo leh oo farxad leh macmiilka ayaa ka faa'iideysan kara iibkaaga si weyn. Markaad haysato macaamiil soo noqnoqda waxaad heli kartaa dookhooda oo aad ugu shaqeyn kartaa si waafaqsan.
5. Tafaariiqda Omnichannel Ayaa Khiyaamada Sameysa
Ganacsiga elektaroonigga ah ayaa sii xoogaysanaya iyada oo loo marayo tartanka goos gooska. Laga soo bilaabo kooxaha waaweyn sida amazon, eBay, iyo Alibaba si aad u bilawdid sida Boxed, Hubiyaha, iyo Slack, waa suuq adag oo lagu tartamo.
Iibinta dukaamada elektaroonigga ah ee Mareykanka waa la saadaaliyay inay koraan laga bilaabo 396.7 bilyan oo doollarka Mareykanka ah sannadka 2016 illaa in ka badan 684 bilyan oo doollarka Mareykanka ah sannadka 2020. In kasta oo iibka tooska ahi weli u taagan yahay oo keliya qayb yar oo ka mid ah dhammaan iibka tafaariiqda - qiyaastii 8.4%. 42% dadka isticmaala internetka ee USA waxay ka iibsadeen alaabada internetka ugu yaraan hal mar bishii.
Buugaagta iyo elektaroonigga ayaa ugu cadcad dukaamaysatada internetka. Ganacsiga elektaroonigga ahi waa marxalad aan qaab keli ahi u shaqeynaynin. Tafaariiqda Omnichannel waa habka ugu fiican ee loogu talagalay.
Dukaameysiga moobiilku waa isbeddelka soo socda ee ganacsiga e-commerce. 2016, waxaa lagu qiyaasaa in kudhowaad 136 milyan oo isticmaale ay ugu yaraan hal jeer ka iibsadeen aaladooda moobaylka. Lambarkan waxaa la saadaalinayaa inuu gaaro 162.8 milyan sanadka 2019. Haddii aad tafaariiqle u tahay e-commerce, hel barnaamij goor dhow.
6. Adeegso Faa'iidooyinkaaga
Si ka duwan dukaan jireed, ganacsiga elektaroonigga ah kuma xadidna dabaqa hoose. Marka ka faa'iideyso dabeecadda firfircoon ee firfircoon ee moodeelkan ganacsi.
Imaatinka data Analytics waxay faa'iido u tahay ganacsiga elektaroonigga ah oo siyaabo badan ugu yaabiya meheradda. Falanqaynta Xogta waxay ku kalifin kartaa tafaariiqda ganacsiga E-commerce meelaha soo socda:
Maaraynta Xeeladda: xogta alaabooyinka ka bilaabanaya bakhaarka ilaa macaamilka.
Ogaanshaha Ganacsi / Macaamiil Been Abuur: Waxaa jira algorithms u oggolaanaya ganacsatada inay saadaaliyaan khiyaanada oo ay ka fogaadaan.
Falanqaynta Ganacsiga: Tafaariiqleyda internetka waxay si joogto ah ugu baahan yihiin jidad cusub oo ay ku ballaariyaan. Si loo dejiyo qiimaha saxda ah marka la barbardhigo qiimaha suuqa, tani waxay ku imaaneysaa mid waxtar leh.
Sicirka Sicirka: Ka hirgeli talooyinka qiimaha guud ahaan meheradaha tafaariiqda ee badan. Waxay tan ku sameysaa iyada oo loo marayo nidaam otomaatig ah oo ka jawaabaya suuqyada iyo dhaqdhaqaaqa tartamada iyada oo ugu yaraan faragelinta aadanaha. Shirkadaha sida Sirdoonka Node waxay soo saareen tikniyoolajiyad iyagoo adeegsanaya xog weyn oo laxiriira sirdoonka tartanka iyo lasocodka qiimaha ee barashada mashiinka iyo caqliga macmalka ah.
Nidaamyada lagu taliyay: Ku dhex mushaaxid dukaan ku dhex jira jawi dalwaddii u baahan naqshad wanaagsan. Nidaamyada lagu taliyay waxay u dhaqmaan sidii naqshad taas.
Falanqaynta alaabada gaarka ah: Helitaanka qaabab ka mid ah iibsashada iyo daalacashada caadooyinka ayaa qiimo u leh ganacsiga elektaroonigga ah si loo hagaajiyo buugaagta alaabada iyo waayo-aragnimada isticmaalaha.
Falanqaynta Suuqgeynta Internetka: Tani waxay ka shaqeysaa dalabyada xayeysiiska Google. Iyaga ayaa horseed u ah hagaajinta waxayna kordhiyaan qiimaha gujinaya-iyo-sicirka.
7. Ha yareysan Ereyga Afka
Haysashada macaamiishaadu inay wax wanaagsan kaaga sheegaan asxaabtooda waa mid aad u xoog badan. Hubso inaadan dhayalsan. Sii iyaga waayo-aragnimo fiican oo raadi siyaabo aad ku hubiso inaad ku hayso fikradahooda adiga kugu habboon sida ugu macquulsan.
Saameeyayaasha wax ku qora boggaga internetka iyo suuqgeynta ku xiran
Suuqgeynta waxyaabaha ku jira waa isbeddelada hadda ka socda xayeysiinta. Ku balaadhi sumaddaada nuxur ahaan ama gadaal ayey u dhici kartaa.
Adeegsiga saamileyaasha iyo qorayaasha wax qora ayaa ah hab fiican oo lagu gaadho bartilmaameedkaaga. Waxay qabataa dareenka iyada oo aan u dhawaaqin sida garoon iib ah. Suuqgeynta gacansaarka waa qaab kale oo loogu faafiyo saameyntaada internetka.
Haysashada joogitaanka khadka tooska ah waa daruuri haddii aad rabto inaad horay ugu sii socoto ganacsiga elektaroonigga ah. Shirkadaha hadda waxay abuuraan qiyaastii $ 2.4 milyan daqiiqad kasta iyada oo loo marayo ganacsiga elektaroonigga ah. Halkaasna, in ka badan $ 40,000 oo funaanooyin ah oo ka socda Facebook, Twitter, iyo Pinterest.
Millennials-ka ayaa ugu sarreeya marka ay timaado tirakoobka da'da markay tahay dukaamaysiga internetka. U fiirso oo cod u yeer dhageystayaashaada bartilmaameedka ah ee warbaahinta bulshada
Waxaa jira habab badans waad raaci kartaa suuqgeynta warbaahinta bulshada ee wax ku oolka ah. Raadi waxa ikhtiyaarrada ah iyo waxa adiga kuu habboon. Taasi waa sida ugu wanaagsan ee ganacsigaagu u kobcin karo.
Tags: AlibabaAmazonfeerkaqolkahubiyahaOgaanshaha Khayaanada Macaamiishaxiriirka macmiilahae-commerceArbacada ahmustaqbalkaFalanqaynta GanacsigaOgaanshaha Ganacsi Khayaanadanew yorkomnichanneltafaariiqda omnichannelFalanqaynta Suuqgeynta InternetkaSicirka SicirkaFalanqaynta alaabada gaarka ahNidaamyada Tafaariiqda Lagu Taliyaykoritaanka tafaariiqdadebcinMedia Social SuuqStoryMaaraynta Xeeladdaerayga afka
Frida Cooper waa cilmi baare tafaariiqle tafaariiqeed lehna shan sano oo khibrad ah.
Waa maxay SEO wanaagsan? Waa tan Daraasad Kiis
Sidee Nadiifinta Liistadeena Macaamiisha ay ugu kordhisay CTR 183.5%
Mar 12, 2021 at 3: 04 AM
Mar 12, 2021 at 1: 37 PM